Mwari Ndiani? | Mashoko Akanaka
1. Nei tichifanira kunamata Mwari?
Mwari wechokwadi ndiye Musiki wezvinhu zvose. Haana mavambo uye haazombofi akava nemagumo. (Pisarema 90:2) Kwaari ndiko kunobva mashoko akanaka anowanikwa muBhaibheri. (1 Timoti 1:11) Sezvo Mwari akatipa upenyu, tinofanira kunamata iye chete.—Verenga Zvakazarurwa 4:11.
2. Mwari munhu akaita sei?
Hapana munhu akamboona Mwari nokuti iye Mudzimu, zvinoreva kuti akakwirira kupfuura zvisikwa zvinooneka zvinogara panyika. (Johani 1:18; 4:24) Kunyange zvakadaro, tinogona kuziva zvakaita Mwari kubva pazvinhu zvaakasika. Somuenzaniso, marudzi akasiyana-siyana emichero nemaruva zvinotiratidza rudo rwake nouchenjeri. Kukura kwakaita matenga nenyika kunotiudza nezvesimba rake.—Verenga VaRoma 1:20.
Tinogona kudzidza zvakatowanda pamusoro pezvakaita Mwari nokuverenga Bhaibheri. Somuenzaniso, rinotiudza zvinodiwa naMwari uye zvaasingadi, mabatiro aanoita vanhu uye zvaanoita mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana.—Verenga Pisarema 103:7-10.
3. Mwari ane zita here?
Jesu akati: “Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngaritsveneswe.” (Mateu 6:9) Kunyange zvazvo Mwari achidanwa nenzira dzakasiyana-siyana, anongova nezita rimwe chete. Rinodudzwa zvakasiyana-siyana mumutauro mumwe nomumwe. MuchiShona rinowanzonzi “Jehovha.” Asi vamwe vanoti “Yave.”—Verenga Pisarema 83:18.
Zita raMwari rakabviswa mumaBhaibheri akawanda richibva ratsiviwa neokuremekedza okuti Ishe kana kuti Mwari. Asi pakanyorwa Bhaibheri, zita raMwari raiwanika imomo kanenge ka7 000. Jesu akaita kuti zita raMwari rizivikanwe paakadzidzisa vanhu nezvaMwari.—Verenga Johani 17:26.
4. Jehovha ane hanya nesu here?
Kufanana nababa ava vane rudo, Mwari ane zvaari kuita kuti zvitifambire zvakanaka kwenguva refu
Vanhu vakawanda zvavari kutambura zvinoreva here kuti Jehovha ndiMwari asina hanya nesu? Vamwe vanhu vanoti anoita kuti titambure kuti atiedze, asi ichi hachisi chokwadi.—Verenga Jakobho 1:13.
Mwari akapa vanhu rusununguko rwokusarudza zvavanoda. Hationgi here rusununguko rwatiinarwo rwokusarudza kushumira Mwari? (Joshua 24:15) Asi vakawanda vanosarudza kuitira vamwe zvinhu zvakaipa, ndokusaka vanhu vakawanda vachitambura. Jehovha haafari paanoona kusaruramisira kwakadaro.—Verenga Genesisi 6:5, 6.
Jehovha ndiMwari ane hanya nesu. Anoda kuti tinakidzwe noupenyu. Munguva pfupi iri kuuya achabvisa kutambura uye vaya vanokukonzera. Iye zvino, ane chikonzero chakanaka chokubvumira kutambura kwekanguva. Muchidzidzo 8, tichadzidza kuti chikonzero chacho ndechipi.—Verenga 2 Petro 2:9; 3:7, 13.
5. Tingaswedera sei pedyo naMwari?
Jehovha anotikoka kuti tiswedere pedyo naye nokutaura naye mumunyengetero. Ane hanya nesu somunhu mumwe nomumwe. (Pisarema 65:2; 145:18) Anoda chaizvo kukanganwira. Patinoedza kumufadza anozviona, kunyange zvazvo dzimwe nguva tichikundikana. Saka pasinei nokuti hatina kukwana, zvechokwadi tinogona kuva noukama hwepedyo naMwari.—Verenga Pisarema 103:12-14; Jakobho 4:8.
Sezvo Jehovha akatipa upenyu, tinofanira kumuda kupfuura kuda kwatinoita chero munhu upi zvake. (Mako 12:30) Sezvaunoratidza kuti unoda Mwari nokudzidza zvakawanda nezvake uye kuita zvaanoti uite, uchawedzera kuswedera pedyo naye.—Verenga 1 Timoti 2:4; 1 Johani 5:3.